ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုတစ်ဦးက New Account ကိုဖွင့်ပါမှကုန်ကျ
လူအများစုဟာတည်ထောင်ရန် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် တရားစွဲမှုထံမှပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုပါ။ သင်တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်းလိုခငျြသောကွောငျ့သငျသညျတခုလေ့ကျင့်ခန်းမဝယ်ကြဘူး။ သငျသညျအပေါက်တစ်ပေါက်ချင်သောကွောငျ့သငျသညျတစျဦးကိုဝယ်ကြလော့။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကမသာ, မမေးရန်လိုအပ်ပါတယ် "ကမ်းလွန်အကောင့်တစ်ခုတည်ထောင်ရန်ထိန်းသိမ်းနည်းကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ?" ကျနော်တို့ကိုလည်းမေးရန်လိုအပ်ပါတယ် "ဘာပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေး privacy ကို၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည်?"
ဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုအဘို့, ပထမဦးဆုံးအုပ်ချုပ်မှုကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်နာမတော်၌အကောင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်း, LLC သို့မဟုတ်ယုံကြည်မှု၏နာမ၌ဖွင့်ပါ။ သင်တို့၏နာမ Pat Smith ကဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါစို့။ သင်ကလမ်းပေါ်ကိုဆင်းဘဏ်တို့မှကနေကမ်းလွန်အားဖြင့်ကျင်းပသည့်အကောင့်တစ်ခုမှဝါယာကြိုးပိုက်ဆံ "Pat စမစ်။ " ဒီဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းလမ်းကြောင်းသင်ကမ်းလွန်အကောင့်တစ်ခုရှိစေတဲ့ကာလကြာရှည်စံချိန်ထွက်ခွာမည်။ ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်ကုမ္ပဏီများသည်သို့မဟုတ်ယုံကြည်မှု၏နာမတော်အောက်တွင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင် ့. အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းနှင့်ထွက်အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက privacy ကိုတိုးပွားစေ ကမ်းလွန်ဘဏ် အရောင်းအကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးချင်းစီ၏အမည်အောက်တွင်ကောက်ယူနေကြသည်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်များအတွက် setup ကိုအခကြေးငွေ $ 550 မှ $ 1,250 အကြားအများအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဘဏ်နှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အပေါ်မူတည်ပါသည်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပုံမှန်အား $ 1,685 နှင့် $ 2,495 အကြားပြေး။ ဒီတော့စုစုပေါင်းများသောအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျ $ 2,235 မှ $ 3,745 ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုအရ Quora, ကမ်ဘာပျေါတှငျခန့်မှန်းခြေ 14,600 ဘဏ်များရှိပါတယ် ဒီအရေးအသား၏အဖြစ်။ သို့သော်အလွန်နည်းပါးဘဏ်များအထူးသဖြင့်သူတို့သည်အမေရိကန်, ဗြိတိန်, ကနေဒါသို့မဟုတ်သြစတြေးလျကနေနိုင်ငံခြားသားတွေအဘို့အကောင့်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ Plus အား, stupendous ကျေနပ်စရာဘက်မှာမနှစ်မြို့ဖွယ်ပြုပါကနေဝန်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအန္တရာယ်ကင်းတော်မူမည်လော သင်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသလား? အဲဒီအကြောင်းစဉ်းစားပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံဖြစ်ပါတယ်။ သင်မှန်စတင်လိုင်းချွတ်သာယာသောနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဘဏ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကငျြတယျ။
ကြီးမြတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးစူပါလုံခြုံ, ဘဏ်များ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ သို့သော်များလွန်းဘဏ်များအင်တာနက်ကိုလှည့်ပတ် bumbling အားဖြင့်ညာဘက်ကိုတဦးတည်းကိုရှာထွက်အဲဒီမှာရှိပါတယ်။ ထွက်ရှာတွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမတိုင်မီရှိခဲ့သည်သူတစ်ဦးမေးရန်ရှိ၏ လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလကမ်းလွန်အကောင့်ကိုထူထောင်ခဲ့သူအထူးသဖြင့်တစ်စုံတစ်ဦး။ ဒီတော့ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကိုငှားရမ်း။ ဒါဟာအသေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညာဘက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ရဖို့ထိုက်တန်ကြလိမ့်မည်။ သင်ပိုမိုသတင်းအချက်အလက်ချင်လျှင်ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပုံစံရှိပါတယ်။ ထွက်ရောက်ရှိဖို့က၏အားသာချက်ယူပါ။
ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်း application တစ်ခုကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့်သင့်အကောင့်ကိုသက်ဝင်ဖို့ကနဦးအပ်ငွေလိုအပ်သည်။ အဆိုပါ application ကိုများသောအားဖြင့်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်အမည်, လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ရှိပါတယ်။ သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးကိုသင်ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာဖို့ရည်ရွယ်ဘယ်လောက်၏ကြမ်းတမ်းသောခန့်မှန်းချက်များနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုငါပေးမည်။
သေချာတာပေါ့, သငျသညျ privacy ကိုအလိုရှိ၏။ သို့သော်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်ဘဏ်သို့လမ်းလျှောက်နှင့်သင့်ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ခြင်းဖြစ်သယောင်ဟန်ဆောင်နိုင်အောင်အများကြီး privacy ကိုမလိုချင်ကြဘူး။ ဒါကြောင့်အဲဒီလိုကသင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တစ် notarized မိတ္တူအဖြစ်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယ, တစ်မူရင်း utility ကိုဥပဒေကြမ်းနှင့်ရည်ညွှန်းအက္ခရာများလိုအပ်နေပါသည်။ သူတို့ဟာလျှင်တစ်စုံတစ်ဦး, အီးမေးလ်များကိုခေါ်ဆိုသို့မဟုတ်တကယ့်ကိုသင်ဖွင့်သောငွေကိုတောင်းခံရန်ဘဏ်သို့လမ်းလျှောက်သင်သိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုလျှို့ဝှက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့သင်သွားပိုက်ဆံမဟုတျဘဲသူတို့သင်ပြောပါတယ်သူတစ်ဦးချင်တယ်။ ဒါကသူတို့ဝိသေသလက္ခဏာစာရွက်စာတမ်းများကိုတောင်းခံဘာလို့ကြီးမားတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာတဦးတည်းရဲ့နိုင်ငံသားအန္တရာယ်ကင်းနှင့်လုံခြုံအဖြစ်၎င်းတို့၏ဘဏ်များစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတစ်ဦးမှာစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုအချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိယာမဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူတက်လာရန်ဘေဆယ်, ဆွစ်ဇာလန်အတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအတူတကွကြွလာ။ ဘဏ်ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပေါ်ယူနိုင်ခဲ့ဘယ်လောက်အကြွေးတင်ဖြစ်သင့်သလဲ ဘယ်လောက်ငွေသားလက်ပေါ်တွင်ထားသင့်သနည်း သူတို့စနစ်ထဲကရာဇဝတ်မှုရရှိသောနှင့်အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်ရန်ယူတယျဆိုတာဘာခြေလှမ်းများလိုအပ်သလဲ?
လူကြိုက်အများဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုမှာကေမန်ကျွန်းများဖြစ်သည်။ ဒီမှာသင်ဖတ်နိုင်သည် Cayman ကုမ္ပဏီနှင့်အကောင့်.
ဒါကြောင့်ဘဏ်တွေကြောင့်လုံ့လဝီရိယလိုအပ်ကြောင်းအခြားအကြောင်းပြချက်သူတို့က "ကောင်းသောယောက်ျားတွေ" ကြိုဆိုပါတယ်နှင့်ထုတ်သိမ်းထားချင်ကြောင်း "မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေ။ " သင် privacy ကိုလိုခငျြပမေညျ။ သို့သော်သင်သည်လည်းသင်၏အပိုက်ဆံအန္တရာယ်ကင်းနှင့်လက်လှမ်းချင်တယ်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျကိုနိုင်ငံတကာအားပြိုင်မှုဘဏ်ပိတ်ပစ်နှင့်သင့်ပိုက်ဆံအေးခဲချင်ကြဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အိုစမာဘင်လာဒင်၏ဝင်စားနှင့်အတူဘဏ် shared လျှင်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုပါပဲ။ သူတို့နှာခေါင်းကြီးသောကြောင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရုံခွဲခြားသတ်မှတ်စာရွက်စာတမ်းများအဘို့မမေးကြဘူး။ သူတို့ကသင်နှင့်အခြားငွေထုတ်လုံခြုံဖြစ်ချင်တယ်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ပေါ့ပေါ့ဆဆစနစ်သို့မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေကိုလက်ခံခြင်းဖြင့်မိမိတို့၏ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုဆုံးရှုံးချင်ကြဘူး။
သူတို့ကချွင်းချက် Make မပြုပါနှင့်အဘယ်ကြောင့်
နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းအခမဲ့မဟုတ်ပါဘူးမလိုအပ်သောဤကြောင့်လုံ့လဝီရိယ၏အားလုံးလုပ်နေတာ။ ဒါဟာပိုက်ဆံကုန်ကျသည်။ ကမ်းလွန်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်မယ့် setup ကိုအခကြေးငွေကပါဝင်ပတ်သက်ဘာဖြစ်လို့ဒီတော့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘဏ်သူတို့ရဲ့လိုင်စင်ဆုံးရှုံးအန္တာရာယ်နှင့်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယဖြစ်စဉ်ကို skip နှင့်သိကျွမ်း-သင့်ရဲ့-ဖောက်သည် (KYC အတွက်) စည်းမျဉ်းများမယ့်မပေးပါ။ သင်တစ်ဦးကောင်းတဲ့ကောင်လေးသို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်လို့ပြောလိမ့်မည်။ သို့သော်ဘဏ်ကသင်သိမထားဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသက်သေပြနိုင်ဖို့သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏နှုတ်ထဲကမထွက်ရိုက်ကူးမီးသူတို့နှင့်အတူမခေါ်ကြောင့်ဘဏ်စည်းမျဉ်းများကိုရှောင်ကွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ရှည်လျားလွန်းတာဒါမှမဟုတ်အလွန်အကျွံသတင်းအချက်အလက်တောင်းကြောင့်သင်တစ်ဦး screeching မျောက်ကဲ့သို့ဆင်းတက်ခုန်ခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ခြွင်းချက်တခုကိုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေသခံအားပြိုင်မှုမှန်မှန်ဘဏ် audit ။ သူတို့ကဘဏ်တွေအကောင့်တခုစီ setup ကိုများအတွက်သေတ္တာများအပေါငျးတို့သ check လုပ်ထားကြပါပြီသေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကမျက်တောင်ခတ်ကာညိတ်ပေးဖို့မျှော်လင့်ထားပါဘူး။ ဒါကသင်တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ဘဏ်ကိုကိုးကားစာတစ်စောင်ရသွားကြဖို့လည်းပျင်းရိကြောင့်သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာသင်သည် Pat မည်မဟုတ်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည်သင့်အဘို့မိမိတို့လိုင်စင်ဆုံးရှုံးအန္တာရာယ်သွားကြသည်မဟုတ်။ သူတို့ကအစားမယ့်အစီအစဉ်ကိုအတူသွားသူလာမယ့်ဖောက်သည်အပေါ်ကိုရွှေ့မယ်။
လစဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ် $ 20, ဒါမှမဟုတ်ဒါမှ $ 100 ကနေ run နိုင်ပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်ခ $ 25 ကနေ $ 75 ဖို့များသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ သင်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာအကောင့်တစ်ခုလိုလျှင်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ရှိရာအဖွဲ့အစည်းများရှိပါသည်။ သင်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိပိုက်ဆံမန်နေဂျာသင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူသင်တို့အဘို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ရှိသည်နိုင်ရှိရာအဖွဲ့အစည်းများလည်းရှိပါသည်။ ပိုက်ဆံမန်နေဂျာများသောအားဖြင့်သူတို့ကစီမံခန့်ခွဲငွေကိုတစ်ဦးအလွန်သေးငယ်သောရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံ။ သဘာဝကျကျ, အခကြေးငွေနှင့်တရားစွဲဆိုပမာဏကိုအမျိုးအစားများအဖွဲ့အစည်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ သူတို့ကအတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောပ္ပံပြင်ပဖြစ်နိုင်သည်။
အကောင့်များ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုသိုက်အပေါ်ပေးဆောင်နှုန်းထားများ, လစဉ်ကြေးနှင့်အမျိုးအစားများကွဲပြားသည်။ အများစုမှာကမ်းလွန်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများငွေထုတ်ဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှုန်းရှိသည်။ ကမ်းလွန် paid အဆိုပါအတိုးနှုန်းပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ထူထောင်၏ဖြစ်စဉ်ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့အခကြေးငွေ, ဆက်သားစွဲချက်နှင့်အချို့သောအသေးစားအထွေထွေကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအမှုအရာတို့ကို OffshoreCompany.com လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပုဂ္ဂလိကကမ်းလွန်အကောင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ယုံကြည်မှုဖွင့်လှစ်ကူညီပေးခဲ့တယ်စသည်တို့ကို, ထိုကဲ့သို့သောသက်သေခံရှေ့နေစွဲချက်အဖြစ်အမှုအရာပါဝင်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အဘို့အထွက်ရောက်ရှိရန်နှင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သူတို့အားလိုအပ်ချက်နှင့်အတူကူညီနိုင်ပါတယ်။
> ကျအခနျး 11 မှ